Networking for System Administrator(SA) - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Network ပိုင်းဆိုင်ရာ
Networking for System Administrator(SA)
Network ပိုင်းဆိုင်ရာ Network ဆိုတာဘာလဲ? Network များအကြောင်း ဆွေးနွေးထားသော နေရာဖြစ်ပါသည်.
24-02-2009, 02:48 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Aug 2008
ပို့စ် 45 ခုအတွက် 301 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Networking for System Administrator(SA)
Originally Posted by ခင်မောင်ထွန်း
ကျွန်တော်တို့ mcse အတွက်လေ့လာမယ်ဆိုရင် တကယ်လေ့လာသင်တာ exam70-290 ပါ။ သူကိုစပြီးလေ့လာသင့်ပါတယ်။ သူကသိပ်မခက်ပါဘူး၊ အလွယ်ကြီးလည်းမဟုတ်အောင်မေးပါတယ်။ တကယ်စာမေးပွဲမှာတော့ multi choice ဖြေခိုင်းတာပါ။ ဒါပေမယ့်
တကယ်အမှတ်များများပေးတာက simulation ကိုပေးတာပါ။ အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆီမှာရှိတဲ့simulation လေးတွေကိုပေးလိုက်တာပါ။
ကိုထွန်းရေ... အခုလို လမ်းစပေးလိုက်တာကို အထူးကျေးဇူးပါဗျာ.... ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီး လေ့လာလိုက်အုန်းမယ်... မသိတာရှိရင်လဲ မေးမယ်နော်... နောက်ထပ်လဲ ကူညီ သင်ပြပေးပါအုန်းနော်...
Visit spaceboy's homepage!
Find More Posts by spaceboy
25-02-2009, 11:16 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Oct 2008
ပို့စ် 41 ခုအတွက် 169 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
290 ကိုလေ့လာမယ် ဆိုရင် CBT 290 ကိုဝယ်ပြီး လေ့လာပါ။ တတ်နိုင်ရင် Cybex တို့ Testout တို့ လဲ ကောင်းပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ koarkarhtut အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by koarkarhtut
26-02-2009, 09:21 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jan 2009
ပို့စ် 156 ခုအတွက် 389 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော့test engineတွေနဲ့လေ့လာပြီးစာမေးပွဲဖြေတာကိုသိပ်မကြိုက်ဘူးဗျ။ Microsoft ကထုတ်တဲ့ Microsoft Window Server 2003 Enveroment. စာအုပ်ကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ဆရာကြီးလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်အမြင်ကိုတင်ပြတာပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ခင်မောင်ထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ခင်မောင်ထွန်း
18-03-2009, 11:28 AM
စာအုပ်ဖတ်တာကောင်း ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်တအုပ်ကို ဖတ်ဖို့အချိန် တလကျော်ကျော် ကြာပါတယ်။ သူများတော့မသိဘူး ကျွန်တော် English အားနည်းလို့ ကြာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
MCSE အတွက်က7ဘာသာ ဆိုတော့ 7လ ကြာမယ့်သဘောရှိတယ်။
တခုပြောရဦးမယ် Realworld မှာ Microsoft တခုတည်းနဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး၊
MCSE ကို ဥပမာ Security (ISA) နဲ့ ယူပြီးတာနဲ့မလုံလောက် သေးပါဘူး၊ Exchange (Mail server)နဲ့ SQL (Database) ကိုလဲနားလည် ထားသင့်တယ်။
ဒါဆိုရင် Microsoft Certifield Systems Engineer ဖြစ်ဖို့ အချိန် 1 နှစ် လောက်ကြာမဲ့ သဘောရှိတယ်။
Exam အတွက် မေးခွန်းကျက်ဖြေရင် တပတ် တဘာသာဖြေလို့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အားမပေးပါဘူး၊ လုပ်လို့ရတာပြောပြတာပါ။
ကျွန်တော် သဘောက Testout တို့ Sybex တို့လိုမျိုး ဟာတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ပြီး မရှင်းတာတွေစာအုပ်ပြန်ဖတ်ပြီး Study လုပ်တာအကောင်းဆုံးပါ။
ဥပမာ Server အပိုင်းမှာဆိုရင်
Network ပိုင်းမှာလည်း Cisco ဆက်သွားရင်အများကြီးလေ့လာရဦးမယ်။
စာအုပ်တွေဖတ်ရင်း နားမလည် ပြန်ချထားလိုက်လုပ်နေတဲ့ညီငယ်တွေအတွက် ကျွန်တော်လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းလေးကို Shareလုပ်လိုက်တာပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ koarkarhtut အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မောင်ထွန်း, ဖယောင်း, bonge, spaceboy
19-03-2009, 02:54 PM
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တောဖြေတုန်းကလည်းအောင်ဖို့ကိုအဓိကထားပြီဖြေတာပါ။ တကယ်နားလည်အောင်ကပြီးမှအလုပ်ခွင်ဝင်ပြီးလေ့ လာတာပါ။ ဖြေပြိးရင်လည်းရပ်နေလို့မရပါဘူး။ မဖြေခင်ကထက်ပိုပြိးလေ့လာရပါမယ်။ အဲဒါကဘယ်သူမဆိုဖြေပြီးမှသိမှာပါ။ ငါမသိတာတွေအများကြီးပါလားဆိုတာကိုပေါ့။
19-03-2009, 06:07 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Dec 2008
ပို့စ် 114 ခုအတွက် 286 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Wireless Network ပိုင်းကိုရော... တတ်သိနားလည်သူများ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်....
[COLOR="Blue"][SIZE="2"]ဘယ်အချိန်မှာ စတင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးတာက စတင်ပြီး
ဘယ်အချိန်မှာ အဆုံးသတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးတာက အဆုံးသတ်ပြီး
နောက် နောင်တ မရဖို့ပါပဲ။[/SIZE][/COLOR]
Last edited by ကြက်ဥခေါက်မုန်&#; 19-03-2009 at 06:13 PM..
Find More Posts by ကြက်ဥခေါက်မုန့်
27-03-2009, 05:30 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Mar 2009
ပို့စ်6ခုအတွက် 10 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by koarkarhtut
moe_poung ဆွေးနွေးထားတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် AD မသိတဲ့ MCSA ,MCSE တွေကတော့ တော်တော်ဆိးုပါတယ်။ ကျွန်တော် မြင်ဖူးချင်ပါတယ်။ ဘယ် computer centre ကသင်ပေးလိုက်တာလဲလို မေးချင်ပါတယ်။
Networking ကို သင်ချင်ရင် ကျွန်တော် ဆရာမျိုးဆီ လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
No,118,5th floor ,Bogyoke Aung San Road and Corner of 48th Street ,
Pazundaung township,Yangon. PH:951-293337
ဆရာမျိုး တပည့် ထဲမှာ ko moe_poung ပြောတဲ့ AD မသိ ,User account မသိတဲ့ administrator & Engineer တွေမရှိပါ။ Exam အတွက်အကူအညီလိုရင် မောင်နိုင်, မောင်ဝေလု,မောင်ကြွယ် တို့ဆီမှာ မေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က ဆရာမျိုး ဆီ က Systems Engineer တွေပါ။ လိုအပ် ရင် ကျွန်တော် နာမည် ပြောလိုက်ပါ။
ဆရာမျိုးဆီဆိုရင်တော့ ကျနော်လဲထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော်လဲခဆရာ့ဆီကနေပဲ သင်တန်ဲးပီးထားတာပါ။
တခြားသင်တန်းတွေနဲ့ မတူတာကတော့ စာမေးပွဲအတွက်သင်ပေးတာမဟုတ်ပဲ တကယ်တတ်အောင်သင်ပေးတာပါပဲ။ဆရာပေးတဲ့ assignment တွေ Project တွေကိုမှန်မှန်လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်
သင်တန်းပြီးတာနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လို့ ရပါပြီ။ ဆရာ့လိပ်စာကပြောင်းသွားပြီဗျ..
No(25) , EaintGyi St, Near YayKyaw Zay & ShweBonw Pwint Pagoda ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ThawZin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ThawZin
10-04-2009, 03:46 PM
23-05-2009, 11:25 AM
စာမေးပွဲမှာ 290 ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ အခုအတိုင်းဆိုရင် 620 ကိုဖြေသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်း client တွေအားလုံးဟာ vista ကိုပဲသုံးလာကြမှာပါ အဲဒိမှာအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဆာဗာလိုဟာမျိုးက migrate လုပ်ရတာ အလွန်ပြသနာတက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ဖူးသမျှတော့အဆင်မပြေတာများပါတယ်။ ။ client ကတော့တော်တော်များများကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ။ 620နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းအချိန်ရရင်တင်ပေးပါဦးမယ်။
21-07-2009, 12:00 PM
မြန်မာ systems engineer အတော်များများ ဟာ server ပိုင်း မှာ server 2003 & 2008 ကိုဖြေကြတာများပါတယ်
ဘာကြောင့် sharepoint , systems management , office communication server တို့ကိုဖြေသူ မတွေ့ ရသလို
သင်တန်းလဲမရှိဘူး ၊ ကျွန်တော် မြန်မာပြည် ကထိပ်ထိပ်ကျဲ သင်တန်းတွေ ( KMD ,MCC ,Computeh ,Ibeam )စတဲ့ ဟာတွေမှာမေးမြန်း တော့ အများစု ဟာ ကြားတောင်မကြားဖူးကြပါဘူး၊ အရမ်း စိတ်ပျက်ရပါတယ်
သင်တန်းတော်တော်များများ ဟာ အလကား ပိုက်ဆံညာယူနေကြတယ် ။ လူငယ်အများစု ဟာသင်တန်းတက်ပြီး ဘာမှမသိကြဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတောင်စဉ်းစားမရတော့ဘူး ဟူး........................
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ koarkarhtut အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
23-07-2009, 05:24 PM
sharepoint တို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသိပ်မသုံးကျလိုပါဗျာ။ ကျွန်တော်လည်းလေ့လာဖူးတယ်။ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျာ
21-10-2009, 10:01 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Aug 2009
ပို့စ် 13 ခုအတွက် 22 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မေးစရာတော့ရှိတယ် ဘာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ မ သိဘူးလေ
networking တက်ထားသင့်တယ်နော် ဘာတက်ရင်ကောင်းမလဲပေပြပြ နော် အကို
ကျွန်တော် ၀ါသနာကတော့ networking ကိုအားသန်တယ် ပြောပြပေးနော်ဘယ်လိုတက်ထားရမလဲ ဘယ်မှာတက်ရမလဲပေါ့
Last edited by tu tu; 21-10-2009 at 10:14 AM.. Reason: merge posts
21-10-2009, 12:16 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Sep 2009
ပို့စ်3ခုအတွက် 14 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အခုလို နက်ဝပ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးထားတာတွေကို အရမ်းသဘေားကျပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ကိုအာကာ နှင့် ကိုခင်မောင်ထွန်းတို့ ကို ပိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုခင်မောင်ထွန်း ရှယ်ပေးတဲ့ MCSE 70-290 ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်က MCSE တို့Novell Open ENterprice Server for NetWare and Linux (VMware) တို့ ကို ကျောင်းမှာသင်ပြီးပါပြီ။ ကိုအာကာပြောတဲ့ Lotus Notes ကိုတော့မသင်ဘူးပါဘူး။ Lotus Notes နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ software, ebooks လေးတွေရှိရင် ရှယ်ပေးပါဦးခင်ဗျာ။ ကျနော်ဒီမှာ အလုပ်ရှောက်ဖို့ က လိုအပ်ချက်ထဲမှာ အဲဒါတွေလည်းပါနေလို့ ပါ။ ကျနော်လည်း ကျနော်သိတာလေးတွေရှိရင်
၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပါမည်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ပုသိမ်သား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မောင်ထွန်း, ဂတုံးလေး, zoard
Find More Posts by ပုသိမ်သား
27-10-2009, 04:51 PM
ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့နက်ဝက်ကိုအရင်မတက်ခင့် ဟာဒ်ဝဲလ်ကိုအရင်လေ့လာတာကောင်းပါတယ်။ ဟာဒ်ဝဲလ်တော်တော်လေးရမှာနက်ဝက်ကိုကူးရင်ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဟာဒ်ဝလ်ကိုအရင်လေ့လာပါဦးလို့အကြံပြုပါရစေဗျာ နောက်မှနက်ဝက်ကို ၀င်းဒိုးပိုင်းအရင်လေ့လာပေါ့နောက်မှနောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတာကောင်းပါတယ်။
02-11-2009, 08:12 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Oct 2009
ပို့စ်0ခုအတွက်0ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
စက်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး pear to pear ချိတ်ုပြီး data တွေပို့မယ်ဆိုရင် antivirus ကိုပိတ်ထားရတယ် ပိတ်ပြီးမှ ပို့လို့ရတယ် မပိတ်ပဲနေရင်ပို့လို့မရဘူး အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ပါ ဗျာ
Find More Posts by တပေါင်း
05-11-2009, 09:52 AM
အရင်ဆုံးanti virus softwareကဘာသုံးတာလဲသိချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စမ်းကြည့်သလောက်တော့မဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်အထင်တော့ window firewallကို ဖွင့်ထားလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ သူ့ကိုပိတ်ပြီးပြန်လုပ်ကြည့်ပါဦး။
12-11-2009, 04:26 PM
ကျွန်တော်exam 290 အတွက်တော့ပြောပြီးပါပြီ။နောက်ကတော်290ပြီးနောက်တစ်လှမ်းလှမ်းမဲညီအစ်ကိုတွေအတွက်ပါဒါကတော့ 620 အတွက်vce exam file လေးပါ။
02-12-2009, 09:56 AM
MCSE exam အတွက်လိုအပ်တာလေးတွေရှိရင်ပြောကြပါဗျာ။ ကျွန်တော်ဖာသာကျွန်တော်ကျတောဘာတင်ပေးရမှန်းမသိလို့ပါဗျာ..
05-12-2009, 12:56 PM
ဒါကတော့ 620 ရဲ့ test engine လေးပါဗျာ..................................
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ခင်မောင်ထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
31-12-2009, 09:17 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jun 2008
ပို့စ် 1 ခုအတွက်3ဦးမှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
please Help me.I want to hack router by software...
not use reset switch .........
Find More Posts by Zayyarminn1
14-03-2017, 05:26 PM
တည်နေရာ: On Earth
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 16 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by Zayyarminn1
dd-wrt ဆိုတဲ့ အဆင်မြင့် Router OS ကိုသုံးကြည့်ပါ... http://www.dd-wrt.com/site/index
Router OS မပြောင်းခင် Router Database စာမျက်နှာမှာ မိမိ Router အမျိုးအစားကို နှင့် version ကို သေသေခြာခြာရှာပြီးမှ Install လုပ်ပါ...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Whoami77 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit Whoami77's homepage!
Find More Posts by Whoami77
14-03-2017, 05:33 PM
ှSA များအတွက် အသုံးဝင်မည့် open source software လေးမျှဝေပါရစေ...
SME Level ကနေ Enterprise Level အထိ အရမ်းကို အသုံးဝင်ပါတယ်...
သေသေခြာခြာ deploy လုပ်ဖို့လိုပါတယ်...
networking howto, networking knowledge
« ကျန်ခဲ့သော | လာမည့် »
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 05:41 AM
မူပိုင်ခွင့် ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd ဖြစ်ပါသည်။